Yaya Toure ayaa laba jeer waxaa loo caleema saarey taajka ciyaaryahanka Kubadda Cagta sanadka ee BBC-da, isagoo afar jeerna uu ku guuleystay magacaabista xiriirka kubadda ee Africa ee Ciyaaryahanka Kubadda Cagta Africa ee sanadka - sidaa darteed ma ahan mid filan waa ku ah ciyaaryahanka, inuu mar kale kasoo dhex muuqdo liiska aan soo gudbinay.
Bishii February, wuxuu u qaaday koobka Horyaalka Ingiriiska kooxda Manchester City - isagoo dhaliyay gool ku laad muhiim ahaa oo ay ku garaaceen ciyaartii kama danbeysta aheyd kooxa Liverpool.
Guushaas ayaa u aheyd Toure midii uu ku go'aan sadey inuu sii joogo, uuna u dagaalamayo booskiisa kooxda City, iyadoo uu yimid tababaraha cusub ee Pep Guardiola - kaasoo maamulayay kooxda Barcelona markii uu ciyaaryahankan u dhashay Ivory Coast uu ka soo tagay.
Inkastoo Toure uusan lahayn ikhtiyaar uu ku kala doorto inuu ka maqnaado kooxda uu xidiga u yahay go'aan kiisa ah soo ceshada xiliyadiisii xirfadda kubadda caalaminimada 2016-ka waxey aheyd dhammaan hawl uu kaligiis qabtay.
Waxey ku qaadatey inuu go'aan kaasi gaaro sanad iyo bar, ka gadaal markii dalalka ka qeyb galayey koobkii Qaramada Africa ee 2015-ka ee ka dhacey Guinea, uu soo wajahay guul daro, ku keentay cadaadis ah inuu baaqi kusii ahaado kooxdiisa Marooriyada.
Ha yeeshee 2016-kii wuxuu ahaa sanadkii uu xaqiiq sadey inuu yahay xiligii uu hawlgab ka noqon lahaa shaqada ciyaaraha caalamiga ah - inkastoo uu qirtay inaanu aheyn mid sahlan go'aanka kama danbeysta ah
"Qoritaanka qoraalkan yar wuxuu ahaa dhabtii mid aad iigu adag intii aan jirey nolosheyda," ayuu ku yiri qoraal uu soo saarey bishii September.
"Dhabtii waxay haatan tahay da'deyda 33 sano jir, xoogga uu leeyahay tababarka iyo baaxadda kulamada ma ahan sabahaha aan u qaadanayo go'aan kan," ayuu yiri.